Izindebe Ezihlukene ZaseJalimane Nezisebenzo Zabo Emagcekeni
Kulesi sifundo, sizohlola isihloko seZenzo Ezihlukanisiwe ngesiJalimane nokusetshenziswa kwazo kwezigwebo. Njengoba wazi, sikubonile ezifundweni zethu zangaphambilini zevidiyo.
Izenzo ezihlukanisiwe zazinendlela ethile yokusebenzisa futhi indlela yokusebenzisa lezi zenzo emishweni kwakufanele zifundwe kahle.
Kuvidiyo yethu mayelana nezenzo ezingahlukaniswa ngesiJalimane ngezansi, sizonikeza izibonelo zalezi zenzo futhi sizobona ngokuningiliziwe ukuthi lezi zenzo zisetshenziswe kanjani emusho.
Sicela ulandele ngokucophelela:
Masikunike uhlu lwezenzo ezibonakalayo esizinikeze ezikoleni zethu zangaphinde futhi: